ဟဲလို ၆လလောက်က ကျမ ယောက်ျားကို မကျေမနပ်ပြောခဲ့ဖူးတာ မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အတူတူနေတဲ့အခါ စိတ်မကျေနပ်ခဲ့ဘူး။ အဲဒါကြောင့် အထွဋ်အထိပ်အချိန်ကို မရခဲ့ဘူး။ ပါးစပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံရင်တောင် သူ့ပစ္စည်းက ဆန္ဒရှိတဲ့လက္ခဏာ မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ အဲလိုမှမဟုတ်ရင်လဲ ဆန္ဒရှိတဲ့ပုံစံက သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး။ အများဆုံး ၁မိနစ်ကနေ ၃မိနစ်လောက်ပဲပေါ့…
ကျမ အပြာကားတွေ ကြည့်တော့ ယောက်ျားတွေအကုန်လုံးမှာ တောင့်တင်းသန်မာတဲ့ ပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ အမြဲတမ်း “ကာမဆက်ဆံဖို့” အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာလေ…
ကျမ အကြံဥာဏ်ကို လက်ခံလိုက်တယ်။ ယော်ကျ်ားကိုလည်း နည်းပေါင်းစုံ စမ်းခိုင်းတယ်။ Viagra ရော တခြား လိင်စိတ်ကြွစေတဲ့ ပစ္စည်းတွေအများကြီးရောပေါ့။ လိင်စိတ်ကြွဖို့ ယောဂတောင် သူ စာရင်းပေးခဲ့သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အားလုံးက အကျိုးမရှိခဲ့ဖူး…
နောက်ဆုံးကျတော့ လက်လျှော့ပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ ခန္ဓာကို ဖန်ရှင်တွေကြောင့်ပဲ အောက်မေ့လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီး နေလိုက်တယ်။ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် ဒီလိုအခြေအနေတွေ ဖြစ်တယ်လို့ပဲ ကျမ လက်ခံလိုက်တယ် … ကျမတို့ ဒီပြဿနာကို ဆွေးနွေးရင် ကျမယောက်ကျားက ကိုယ့်ကိုကို ယုံကြည်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ ကျမ မြင်တယ်။ ရလဒ်တိုင်း အတူတူတွေပဲ ဖြစ်နေလို့ ကျမ သူနဲ့ အတူတူတောင် မအိပ်ချင်တော့ဘူး… လုံးဝ စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိ ယောက်ျားလည်း စိတ်ဓာတ်ကျ…
အဲ့နောက် ရုတ်တရက် အံ့အားသင့်စရာ ရောက်လာေတော့တာပဲ – Hammer of Thor ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ပံု
၆လလောက်က မက်ဂဇင်းတစ်ခုကို သွားတွေ့တယ်… အဲဒီမှာ အပြာကားမင်းသား Donald Ramsek နဲ့ “Talk with you” လို့ခေါ်တဲ့ တီဗွီအစီအစဉ်တစ်ခုမှာ အင်တာဗျူးတစ်ခု ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ရှင်တို့လည်း အဲ့အစိအစဉ် သိချင်သိမှာပေါ့… အင်တာဗျူးမှာပြောထားတာက သူ့အတွေ့အကြုံရယ် ယောကျားတိုင်း စိတ်ရှိသလောက် လိင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်တဲ့… သူ့ပစ္စည်းကို သူလိုချင်တဲ့ ပုံစံရောက်အောင်လုပ်ပြီး အတက်ကြွဆုံးအချိန် ရောက်နိုင်တယ်တဲ့… အဲဒီစကားက ကျမယောက်ျား အမြဲကျိုးစားနေတဲ့ အရာပဲ…
အဲလိုလုပ်ဖို့ သူ့အတွေ့အကြုံအရ ယောက်ကျားတိုင်း ပစ္စည်းတစ်မျိုးပဲ လိုအပ်တယ်တဲ့… အဲဒါက Hammer of Thor အာ့ကို သုံးပြီးရင် ခန္ဒာကိုယ်က လိင်ဟော်မုန်းတွေကို အများကြီး အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးတယ်… အဲဒီနည်းနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာ ပိုကောင်းလာတယ်… လိင်စိတ်ကြွမှု ပိုကောင်းလာပြီးတော့ လိင်စိတ်ဆန္ဒ အများကြီးပိုမြင့်လာတယ်။ နောက်ထပ်တခုက ပုံမှန်သုံးရင် ပစ္စည်းဆိုက်လည်း ကြီးအောင် လုတ်ပေးတယ်…
Donald အကြံပြုထားသည် Hammer of Thor ယောက်ျားအားလုံးအတွက် တကယ်ထိရောက်မယ်ဆိုတာ သူသိနေတယ်လို့ ပြောတယ်… တခြားပစ္စည်းတွေ အားလုံးကတော့ အတုတွေကြီးပါပဲတဲ့…
အဲ့ဆောင်းပါးဖတ်ပြီး သူပေးထားတဲ့ လင့်ကနေ ဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ပဲ ပစ္စည်းမှာလိုက်တယ်။ အဲ့ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချတဲ့ တရားဝင်ကုန်ပ္ပဏီက တစ်ခုထဲပဲ ရှိတယ်။ ဒါက အာ့ဝဘ်ဆိုက်
အော်ဒါမှာပြီး တရက်နှရက်နေတော့ ပါဆယ်ရောက်လာတယ်။ အိမ်အရောက်ငွေချေနဲ့ ပေးရတာ… အားလုံး စိတ်ချရပါတယ်
အကျိုးကျေးဇူးက ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲ – Hammer of Thor လိင္တံၾကီးထြားမႈအတြက္ နံပါတ္ ၁ ကုန္ပစၥည္း
ပစ္စည်းကိုဖွင့်ပြီး ဘယ်လိုအသုံးပြုရတယ်ဆိုတာကို ဖတ်တယ်။ ပြီးတော့ ယောက်ျားကို သုံးခိုင်းတယ်… နှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာပဲ သူ့ပစ္စည်းက တကယ့်ကိုကြီးလာပြီး အတူအိပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတော့တာပဲ
အကျိုးက ထင်ထားတာထက်တောင် ပိုသေးတယ်… တစ်ဘဝလုံး တစ်ခါမှ ဒီလိုခံစားမှုမျိုး မကြုံခဲ့ရဘူးဖူး… အရမ်းမိုက်တာပဲ တစ်နာရီနဲ့ ၄၇မိနစ်လောက် ကျမတို့ အတူအိပ်ခဲ့တယ်… ဒီပစ္စည်းက အကျိုးရှိမယ်လို့တော့ ထင်ခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်ကောင်းမယ်လို့တော့ မမျှော်လင့်ထားဘူးရယ်။ သူ့ပစ်စည်းက တစ်ချိန်လုံး သံလို မာကြောနေတာပဲ အမယ်လေးလေး အရမ်းကို အားရှိတာပဲ
တကယ်ပါပဲ… ဒီပစ္စည်းက သူ့ခန္ဒာကိုယ်မှာ ဒီလောက် အသိသာကြီး အစွမ်းထက်မယ်လို့ မယုံနိုင်ဘူး ပြီးတော့ ပစ္စည်းအရွယ်အစားလည်း အထောက်အကူပေးတယ်တဲ့… ယောက်ျားအင်္ဂါရဲ့ မာဆယ်တွေကို ဆန့်တင်းစေပြီးတော့ ပိုပြီး ပါဝါအားကောင်းနဲ့ တက်ကြွစေတယ်တဲ့… နောက်ပိုင်း ကျမယောက်ျား ပစ္စည်း ဘယ်လောက် ရှည်လာတယ်ဆိုတာ ကြည့်ရဦးမယ်… ဆေးတောင့်က ရုပ်ရှင်လက်မှတ်နှစ်စောင်စာပဲ ရှိတယ်… ဈေးကိုတော့ သုံးသူကပဲ အကဲဖြတ်ပေါ့ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်တစ်ဘဝလုံးကြီးကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်တယ်… ကောင်းဖို့အတွက် ငွေသုံးလိုက်တာ တွန့်ဆုတ်မနေဘာနဲ့
အာ့ကြောင့် ဒီအထူးပစ္စည်းကို စမ်းသုံးကြည့်ဖို့ ကျမ အကြံပြုပါတယ်… သုံးဖူးပြီးတဲ့လူဆိုရင် အတွေ့အကြုံလေး မျှဝေပေးပါအုံး
သုံးသပ်ချက် – Hammer of Thor တကယ့္ရလဒ္အစစ္, အကျိုးကျေးဇူးများ, ဆေးတိုက် စြေး
ကျွန်မယောက်ကျားတော့ ဒီဟာကို သဘောကျနေပုံပဲ 🙂 ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးမျိုး သူမဖတ်ဘူး။ ကျွန်မတို့ သုံးတာ Hammer of Thor ကျွန်မ ပိုမပျော်နိုင်ဘူး။ လိင်ဆက်ဆံရတာ တကယ့်ကိုအဆင်ပြေတယ်. ဟီးဟီး
မနေ့က အော်ဒါရလာတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ ခွန်အားတွေ တက်ကြွမှု တွေ အပြည်ခံစားရလာ သလိုပဲ အရမ်းမိုက်တယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ စိတ်တက်ကြွတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပီပေါ့ ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး 🙂
အမေရိကားမှာနေတဲ့ ကျွန်တော့်အကိုက ဒီပစ္စည်း အဲ့မှာ အရမ်းပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောတယ် လူတိုင်း ကြိုက်ကြတယ် ကျွန်တော်လည်း မသိဘူး
အရမ်းကောင်းတယ် ကျွန်မယောင်္ကျားအတွက် ဒီပစ္စည်း မှာရတော့မယ် 🙂
ကျွန်တော်သုံးတာ နှစ်ပတ်ရှိနေပြီ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရင် ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ ရလဒ်မျိုး မမျှော်လင့်ထားဘူး တကယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်။
ကျွန်မယောက်ျားအတွက် ဝယ်ခဲ့တာ အခုဆို နေ့တိုင်း ကျွန်မတို့ အတူအိပ်တယ်။ ဟီးဟီး
ရှင့်မှာ အရမ်းတော်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ယောက်ျားအားလုံးကို သူ့လို ဖစ်စေချင်တယ် xD
အမေရိကန်တွေ ဒီပစ္စည်းသုံးလာတာ အတော်ကြာပြီ သူတို့တွေ တကယ်ယုံရင် အဲ့ပစ္စည်းက တကယ်ကောင်းလို့ပဲ ဖြစ်ရမယ်
ဟိုင်း ကျွန်မယောက်ျားအတွက် အာ့ပစ္စည်းကို မှာလိုက်တယ်။ ပြောစရာစကားတောင် မရှိဘူး။ ယောက်ျားက မမောမပန်းဘဲ ကျွန်မနဲ့ non-stop အတူကြိုးစားပဲ
ကျွန်တော်သုံးတာ တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ။ ရလဒ်ကို စိတ်ကျေနပ်ရပါတယ် 🙂
ဒီပစ္စည်း ဝယ်ခဲ့တာ ကျွန်တော် ပျော်ရပါတယ်။ အရင်က လိင်ဆက်ဆံနေရင် စိတ်တက်ကြွတဲ့ပြဿနာ ရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်က စိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွမှု အားနည်းတယ်။ အခုတော့ အားလုံး ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီ အပီးတိုင်ပဲ
Hammer of Thor ကျွန်တော်လည်း ကြားဖူးခဲ့တယ် လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ခရီးသွားရင်း ဝယ်ခဲ့တာ အသုံးဝင်တယ်။ အမျိုးသားအားလုံးအတွက် သုံးကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်
ကျွန်တော့်အမျိုးသ္မီးကတော့ အရမ်းအံ့ဩနေတာ။ ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သူလဲ သူနားမလည်တော့ဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ ကျွန်တော်တို့ အတူအိပ်တဲ့အကြိမ်ရေ မြင့်လာပီ ကျွန်တော်တို့နှယောက်စလုံး ပျော်ကြတယ် ဟဟဟ
ဒီပစ္စည်းက အသုံးဝင်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံ ကြိုမပေးရဘဲ ဝက်ဆိုက်ကနေ ကျွန်တော်လည်း မှာခဲ့တယ်။ ၆ရက်နေတော့ ပါဆယ် ရောက်လာတယ်
၁မီတာ အရမ်းပျော်ရတယ်။ အခု ကျွန်တော်က ကံကောင်းတဲ့လူဖြစ်ရတာ Hammer of Thor ကြောင့်ပါ.
ခဗျားတို့ကိုလည်း ကျွန်တော့်လို ပျော်မယ် မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ လိင်ဆက်ဆံဖို့ အမြဲ အဆင်သင့်ဖြစ်နေနတယ်။ အနည်းဆုံး တစ်နာရီကြာအောင် တောင့်ခံနိုင်တယ်။ ဆောင်းပါးအတွက် ကျေးဇူးပါဗျိုး
ကျမလည်း ဒီပစ်စည်းကို သိပါတယ်. ကျမအမျိုးသား သုံးတယ်။ အခု သူက ကျမ နည်းနည်းပင်ပန်းလောက်အောင်အထိ ကျမကို အမြဲတမ်း လိုချင်တယ်
ဒီဟာက ကောင်းပါတယ်။ အော်ဒါရဖို့ စောင့်နေတယ်။ ကျမအစ်ကိုအတွက် နောက်ထပ်ဝယ်ခဲ့တာ
ပထမတော့ စပ်စုချင်လို့ ဒီပစ်စည်းကို ဝယ်လိုက်တာ။ ဒီပစ္စည်းတွေက ထိရောက်မှု တိုးတက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ ယုံမှမယုံနိုင်တာ။ ဒါပေမဲ့ ၂ရက်နေတော့ ကျွန်တော့ ကောင်မလေးနဲ့ တွေ့ပြီး ၂နာရီလောက် ပျော်ခဲ့ရတယ် xDxD
ဘာမှအသစ်မဟုတ်ဘူး။ လူတိုင်း Hammer of Thor ကို သိတယ် ဒါကို မသိတဲ့သူတိုင်း မသိလောက်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီလူက လိင်ဆက်ဆံတာကို အလေးမထားလို့ပါ။ သူက အကောင်းဆုံး လိင်မှုဘဝနဲ့ လိင်စိတ်ဆန္ဒကို ပေးနိုင်တယ်။